Esi Spotify akwụkwọ ego
The akwụkwọ ego bụ ihe na ụmụ akwụkwọ nile bụ mgbe na mgbe ọ na-abịa Spotify ọ na-eme ka n'aka na ihe kasị mma ndị na-enwe na ego a na-availed enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Na akụkụ ikpeazụ nke a nkuzi ga-ahụ na onye ọrụ na-akawanye ihe ọmụma banyere akwụkwọ ego na pụkwara mejuputa Filiks na e agbakwunyere iji jide n'aka na ihe kasị mma ndị na-enwe na gụgharia ọrụ na-na-na-ndụ maka ọnwa 12 oge ka ​​e kwere ná nkwa site na ụlọ ọrụ ya banyere.
Part 1.Advantages nke akwụkwọ ego
Part 2.Process nke edebanye maka amụrụ ngwugwu
1. Uru nke akwụkwọ ego
Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma na ala nke nkà omume ga-eme ka n'aka na ọ bụghị nanị na Spotify adịchaghị ire ere abawanye ma ọ na-ana achi achi na mgbe oge nke ọnwa 12 ma ọ bụrụ na a na-amụrụ adịghị anọgide a na-eru eru amụrụ mgbe ahụ a nwere ahịa na-enweta na-dị njikere iji jide n'aka na zuru eri na-akwụ ụgwọ. Ọ bụkwa otu nke kasị mma na ọkaibe omume nke na-ahụ na-amụrụ ọkọkpọhi kasị mma amụọ na-enye ha ohere iji Spotify na-akparaghị ókè enweghị ihe ọ bụla ọzọ ebubo dị ka mma.
Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ịrịba ama elu usoro dị nnọọ mfe ma na-amụrụ nwere ime ihe ọ bụla iji mee ka n'aka na ngwugwu aka maka. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị mma atụmatụ nke e awa site ọzọ ụlọ ọrụ na nke a, ya mere Spotify na-emekwa ka n'aka na ha anọgide na-a ọsụ ụzọ na nke a na-enweta nnọọ mma ọrụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Kasị mma na ndị ọkaibe mmemme na-agbakwunyere n'ime Spotify akaụntụ nwekwara lures ụmụ akwụkwọ ahụ n'ime azụmahịa na-enye ha ohere banye maka ngwugwu.
2. Usoro nke edebanye maka amụrụ ngwugwu
Niile ngwaọrụ na-achọrọ ina aka maka na-amụrụ ngwugwu dị online na maka otu ihe ahụ ọ bụ-ahụ kwuru na eligibility ego bụ ihe na e abuana ke usoro a dị ka mma. Ọ bụ na-amụrụ na kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà usoro na-abụghị nanị soro ma eligibility na-enyocha na ụmụ akwụkwọ ahụ ga-esi na kacha mma n'ihi na nke a ka mma. Na-amụrụ dịkwa mkpa iji jide n'aka na ihe kasị mma atụmatụ nke mmemme na-awa site Spotify na-enwe na 50% ego dị ka na-amụrụ ngwugwu pụtara 50% ego na Spotify adịchaghị.
Usoro na abuana na nke a na-emekwa ka n'aka na-amụrụ mgbe odụk hassle nke ileta tinyekwa ha n'onwe ya na maka otu ihe ahụ ọ dịkwa nnọọ mkpa iburu n'obi na Ohere nke edebanye n'ihi ya ka e ụba dị ka mma. Iji jide n'aka na usoro a soro na nke kacha mma n'ụzọ onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na usoro na e kwuru n'okpuru ebe na-abụghị nanị soro ma ọ bụ na
1. The SheerID bụ otu ụlọ ọrụ na e goro ka n'aka na nwata akwụkwọ ego na-nyere na zuru ezu akuko a na-eme na nke a. Iji malite usoro-amụrụ mkpa ijide n'aka na na URL https://spotify.sheerid.com/ a gara na ndị niile chọrọ ọmụma jupụtara elu:
2. The amụrụ ugbu a mkpa ijide n'aka na na na nzọụkwụ ọzọ akwụkwọ na-achọrọ na-a na-amụrụ ma ọ bụ choro site na ụlọ ọrụ na-uploaded iji jide n'aka na usoro ọganihu. The akwụkwọ ga na-agụnye ọmụma na e choro iji jide n'aka na a na-amụrụ ego na-availed enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Alternatively ma ọ bụrụ na nwa akwụkwọ ahụ na-enwe nsogbu ke ebugote na akwụkwọ ha nwekwara ike kpọtụrụ OKÉ ID otu iji jide n'aka na nsogbu ahụ na-kpebiri na-amụrụ na-aga n'ihu na nke a. Ọ njikọ nwekwara e kwuru okwu ya na ala nke page:
3. Ozugbo akwụkwọ e uploaded nyochaa ga-amalite na-amụrụ ga-enweta ihe email na adreesị na e kwuru:
Ọ bụrụ na ndị nyochaa kemgbe ihe ịga nke ọma na-amụrụ ga-nyere ihe ID na o nwere ka mado mgbe edebanye maka akwụkwọ ego ma ọ bụrụ na nkwenye ada ada mgbe ahụ na-amụrụ ga-asian nke niile adịghị emezi emezi ya mere na o-agbazi ha na- irè. Na-amụrụ ga-enweta a conformation, ọ ga-aga na website iji jide n'aka na-enye availed:
> Resource> Spotify> Esi Spotify Mmụta Discount